[Naanị] 'Mwepụta Mbipụta Ọhụrụ' Aghọtara (Ọzọ) - iHorror
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ [Naanị] Ọpụpụ 'Mutants Ọhụrụ' A Na-akụtu (Ọzọ)
[Naanị] Ọpụpụ 'Mutants Ọhụrụ' A Na-akụtu (Ọzọ)
edere ya David N. Grove April 17, 2019
Echefu banyere August 2, 2019 ahụ, North America ụbọchị ịhapụ Ndị New Mutants. Releasebọchị mwepụta maka Ndị New Mutants, nke dabere na otu Marvel Comics nke otu aha ahụ, emegharịala ọzọ, dị ka isi iyi na Fox si kwuo.
Oge izizi emere maka Ndị New Mutants, nke malitere ikiri ihe nkiri na July nke 2017, bụ Eprel 13, 2018. Nke a kwagara na February 22, 2019, tupu ọ rute na ụbọchị kachasị nso.
Releasebọchị ọhụụ ọhụrụ ewepụtabeghị maka Ndị New Mutants, dị ka isi iyi Fox si kwuo. "Ihe nkiri a na-akpali n'ihi njikọ Disney-Fox," ka isi iyi ahụ na-ekwu. “Ha chọrọ ichere ruo mgbe ejikọsịrị njikọ ahụ tupu ha emee mkpebi banyere ịhapụ ụfọdụ fim, gụnyere Ndị New Mutants. "
Ọ bụ ezie na isi iyi ahụ jụrụ ikwu ma ụbọchị ịhapụ maka Ndị New Mutants A ga-ebugharị kpamkpam na 2019, nke a ga-eyi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe doro anya, nyere Fox na, ka a na-akọ, ka na-achọ reshoots, nke na-amalitebeghị. Nhomanimfo bi ka sɛ: “releasebọchị ọhụrụ a ga-ewepụta ga-adị anya site n'August. "Ọ dịghị ihe ọzọ a maara ugbu a."
Ndị New Mutants, nke a kọwara dị ka ihe nkiri na-atụ ụjọ n'ụdị okike, bụ Josh Boone, bụ onye dere akụkọ ngosi ahụ na Knate Lee ma jiri ya tụnyere ihe nkiri ahụ. Rosemary nwa na The mbadamba na-egbuke.
Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt, na Alice Braga kpakpando n'ime ihe nkiri a, nke na-elekwasị anya na otu ìgwè nke ndị na-eto eto mutant bụ ndị a na-ejide n'ụlọ nzuzo ma nwee ọgụ iji zọpụta onwe ha.
Anya Taylor-JoyFoxJosh BooneịtụnanyaIju ihe nkirindị ọhụrụ mutantsNdị ọhụrụ ahụ. X-Nwoke
David Grove bụ onye edemede, odeakụkọ na onye ode akwụkwọ si Vancouver. Ọ bụ onye edemede nke akwụkwọ Na-eme Friday na 13th, Fantastic 4: Nme Ihe nkiri ahụ, Jamie Lee Curtis: Tie mkpu Queen, Na Ọnọdụ na Blairstown: Ime Friday nke 13, na Jan-Michael Vincent: Edge of Greatness.
Black Fawn VOD na-eweta Nhọrọ Horror egwu egwu ọhụụ na Canada
Stephen na Owen King bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado Pilot na AMC maka 'Sra Ihi ụra'